Tamin’ny teny hentira no nanaovan’ny filoham-pirenena teo aloha sady filoha mpanorina ny Arema, Amiraly Didier Ratsiraka, io fanambarana io tany Toliara io ny sabotsy 10 desambra 2016, nandritra ny famaranana ny fankalazana ny faha-40 taona nijoroan’ny antoko. Ny Parlemanta dia mahavita izany fa tsy ilàna fitsapa-kevi-bahoaka, hoy izy. Antony anisan’ny hanovana io lalampanorenana io, raha ny fanazavan’ny Amiraly Didier Ratsiraka dia ny fahasahiranana mahazo ny filoham-pirenena rehefa hanendry izay ho Praiminisitra izy. Ilaina ihany koa ny fanovana ny fitantanana eo amin’ny CENI na Vaomieram-pirenena mahaleotena momba ny fifidianana, koa tokony hisy solontena isaky ny Faritra mipaka any amin’ny Distrika mba tena hahaleotena, hoy hatrany izy nanohy ny fanazavana. Foany any koa ny biletà tokana fa ndao hampiasa “vote électronique” tsy hisian’ny hosoka, hoy izy. Nasiany tsindrim-peo manonkana ny tokony hanatanterahana ny fampihavanam-pirenena. Niantso ny rehetra hifanome tanana hanavotana ny orinasam-panjakana Air Madagascar sy ny Jirama ihany koa ny tenany. Tonga maro ny vahoakan’i Toliara nanotrona ny Amiraly Didier Ratsiraka tao amin’ny efitrano malalaky ny Père Barré Sanfily, sy ireo nitsena azy teny amin’ny seranam-piaramanidina Andranomena Toliara, ka nampihetsi-po ny filoha teo aloha mivady izany. “Mbola tsy mahafoy ahy i Toliara”, hoy i Deba.